Ethereum Wallet ImToken manana $ 35B in mipetraka, mihoatra ny 99% ny US banky - Blockchain News
Jona 3, 2018 Admin
Ethereum Wallet ImToken manana $ 35B in mipetraka, mihoatra ny 99% ny US banky
Shina-monina ImToken, iray amin'ireo voalohany Cryptocurrency sy Ethereum mpanjifany voasoratra ao amin'ny Apple Store App, dia ampiasaina mihoatra noho ny $ 35 lavitrisa in mipetraka tato anatin'ny taona vitsivitsy, outperforming Coinbase.
Similar ny Blockchain, MyEtherWallet sy MyCrypto, ImToken dia maimaim-poana sy ny tsy vavahadin-tserasera kitapom-batsy izay mamela ireo mpampiasa mba hitahiry, mandefa sy mahazo cryptocurrencies toy ny Ethereum raha notazonina feno manokana fanaraha-maso ny fanalahidy sy ny kaonty.
Tany am-piandohan'ny andro Ethereum, talohan'ny fampandrosoana mpanjifany malaza toy ny MyEtherWallet sy MetaMask, ImToken no hany azo antoka kitapom-batsy mpampiasa finday afaka ampiasaina amin'ny fitaovana finday. Voalohany ImToken-mover tombony sy ny tsotra ny fampiharana niafara tamin'ny sehatra manazava bebe kokoa noho ny $ 35 lavitrisa in mipetraka, nisolo tena mihoatra noho ny 99 US isan-jaton'ny banky.
Amin'ny Mey, Bloomberg dia nitatitra fa Xapo, izay ampiasaina mihoatra ny $ 10 lavitrisa in mipetraka nandritra ny telo taona, manana bebe kokoa amin'ny mipetraka noho ny 5,670 banky tany Etazonia na 98 isan-jato ao amin'ny firenena banky. $ 35 lavitrisa in mipetraka ho an'ny ethers sy ny hafa dia ho ImToken cryptocurrencies-tampon'ny 0.5 isan-jato, miaraka amin'ny banky lehibe sy ny andrim-panjakana ara-bola.
Ny fampiasam-bola avy any Shinoa VC Giant IDG Capital
IDC Capital ny Shina miorina ImCrypto, izay iray amin'ireo orinasa lehibe indrindra renivohitra orinasa in Asia, nahazo $ 10 tapitrisa manodidina ny fanohanana ara-bola tamin'ity herinandro ity. IDG Capital dia vola be noho 700 orinasa miaraka amin'ny 150 mahomby fivoahana, anisan'izany ny multi-arivo tapitrisa dolara orinasa toy ny finday mpanao Xiaomi, wearable bateria mpanao Anker, Ataovy anaty boribory cryptocurrency orinasa sy ny cryptocurrency swap Coinbase.
Ny fandraharahana modely ImCrypto dia mitovy amin'ny an'i Blockchain fahirano sy ny hafa tsy fanatobiana sehatra. Noho ny mangarahara miasa sy ny rindrambaiko malalaka, tsy manana loharanom-bola marin-toerana. Na dia tsotra ny sehatra ImCrypto farany nahatonga ny fahombiazana maharitra, ny sarotra ny monetizing ImCrypto na dia eo aza ny an'arivony tapitrisa dolara eo amin'ny sehatra voatahiry ho heverina ho toy ny olana lehibe amin'ny mpampiasa vola, indrindra fa barotra capital orinasa, ao amin'ny orinasa teknolojia nentim-paharazana.
IDG Capital ny $ 10 tapitrisa fampiasam-bola nampiseho matoky ny maharitra fitomboan'ny ny cryptocurrency sy ny kitapom-batsy mpandraharaha. Na dia tsy afaka mandefa-mpanjifany amin'izao fotoana izao tsy misy varotra sy ny tombony sisiny ambany, capital orinasa barotra mihazakazaka mbola an-tapitrisa dolara sarobidy ny famatsiam-bola, manaiky ny mety ny cryptocurrency mpanjifany.
“Tsy fantany ny mety ny Ethereum tamin'ny fotoana iray tena Vao nanomboka, ary nifantoka tamin'ny differentiating ny tenantsika amin'ny mpifaninana, ny fitomboana dia tanteraka voajanahary, izahay tsy nanana teti-bola barotra na dokambarotra,” hoy ImToken mpanorina Ben Izy, nilaza fa vao nahazo miasa Renivohitra IDG no hanampy ny orinasa hanao varotra sy mahery setra fanitarana ao amin'ny tsena maneran-cryptocurrency.
Matokia avy amin'ny mpampiasa vola
Vao haingana, nandritra ny tafa sy dinika tamin'ny Bloomberg Television, Dan Morehead, Tale Jeneralin'ny Pantera Renivohitra, ny $ 1 cryptocurrency fefy lavitrisa tahirim-bola, hoy ny cryptocurrency ny hataonao tombany tsena dia mety mihoatra $ 40 tapitrisa tapitrisa izany any aoriana any.
“The $ 400 lavitrisa crypto tsena mety hahatratra $ 4 tapitrisa tapitrisa, ary na dia $ 40 tapitrisa tapitrisa dia tena azo atao, izany ny 10-taona forecast, izany dia tsy ho tanteraka mandritra ny alina,” hoy izy Morehead.
Barotra goavana renivohitra orinasa sy ny vola amin'ny ankapobeny fefy be fanantenana momba ny maharitra cryptocurrency toetry ny tsena ary matoky fa cryptocurrencies ho lasa lehibe kilasy pananana izay hifaninana amin'ny nentim-paharazana sy ny fananana ara-bola maneran-rafitra.